घर9उत्पादन9MotioPI
Cognos केहि सामान्य सामग्री कार्यहरु को लागी समय र प्रयास को मांग हुन सक्छ। हामी Cognos पेशेवरहरु लाई तपाइँ र तपाइँको टीमहरु लाई प्रणाली भित्र सामग्री मा दृश्यता दिन्छौं ताकि उनीहरु सजीलै प्रयोगकर्ता को उपयोग, भण्डारण, कार्यक्रम, र नि: शुल्क को बारे मा अधिक प्रश्नहरु को जवाफ दिन सक्छन्!
जब यो सामूहिक अपडेट र सामग्री मा परिवर्तन को लागी समय हो, हामी Cognos प्रशासकहरु को साथ साथै मद्दत Motioपीआई प्रो।
"एक आश्चर्यजनक शक्तिशाली उपकरण; कुनै पनि गम्भीर Cognos प्रशासकको लागि हुनुपर्दछ।"
वरिष्ठ Cognos एनालिटिक्स प्रशासक / विकासकर्ता
MotioPI फ्रीवेयर एक Cognos प्रशासक को सबैभन्दा राम्रो साथी हो
Motio Cognos प्रयोग गर्न सजिलो र अधिक शक्तिशाली बनाउन को लागी जुनून मा स्थापित भएको थियो। तेसैले, हामी सधैं एक विशेष ड्राइभ चीजहरु राख्ने र कुशलतापूर्वक चलाउन को लागी आरोप लगाएकाहरुको लागी जीवन सजिलो बनाउन को लागी भएको छ - Cognos प्रशासक।
यहाँ मात्र कसरी एक नमूना हो MotioPI तपाइँलाई अधिक कुशलतापूर्वक काम गर्न मद्दत गर्दछ, स्वचालित कार्यहरु सहित कि अन्यथा थकाऊ समय डुब्न सक्छ:
हराएको, क्षतिग्रस्त, वा मेटिएको फ्रेमवर्क मोडेलहरु लाई पुनःप्राप्त गर्नुहोस्
मेटिएको Cognos प्रयोगकर्ताहरु बाट सामग्री पुन: प्राप्ति
क्वेरी र सबै Cognos सामग्री कि विशिष्ट मापदण्ड (जस्तै एक विशेष प्याकेज बन्द सबै रिपोर्टहरु को रूप मा) मेल खाने पाउन
निगरानी र तपाइँको प्रयोगकर्ताहरु को सुरक्षा सेटिंग्स को सबै कागजात
प्रेषकहरु, डाटा स्रोतहरु, रिपोर्ट सेवाहरु, र स्थापित घटकहरु को लागी दस्तावेज सम्पत्ति सेटिंग्स
एक मोडेल को लागी परिवर्तन पछि रिपोर्टहरु प्रमाणित गर्नुहोस्
कागजात तालिका प्राप्तकर्ताहरु
संग पूरा उपकरण बक्स अनलक गर्नुहोस् Motioपीआई प्रो।
MotioPI प्रो Cognos प्रशासक उपकरण र स्वचालन Cognos संग तपाइँको काम को लागी अझ धेरै दक्षता ल्याउन दिन्छ। आफैं को लागी मूल्य को न्याय गर्नुहोस्। उदाहरण को लागी:
यदि तपाइँ एक एकल रिपोर्ट परिवर्तन गर्न २ मिनेट लाग्छ, १०० रिपोर्टहरु लाई अपडेट गर्न कती समय लाग्छ? संग MotioPI प्रो, जवाफ २ मिनेट को बारे मा छ - शायद कम।
यदि एक कर्मचारीले कम्पनी छोड्यो, र उनीहरुको फोल्डरहरु सफा गरीएको थियो, कति समय लाग्ने यो कार्यक्रम वा रिपोर्ट हराएको फाइलहरुमा निर्भर तय गर्न? संग MotioPI प्रो, जवाफ मिनेट छ।
यदि Cognos वस्तुहरु नयाँ स्थानहरु मा सारिएको छ, कति समय यो टूटेको सर्टकट लिंक को मरम्मत गर्न को लागी हुनेछ? MotioPI प्रो तपाइँ स्वचालित रूपमा सर्टकट अपडेट गर्न को लागी जब तपाइँ Cognos वस्तुहरु लाई सार्न को लागी अनुमति दिन्छ।
MotioPI प्रो तपाइँ समय, प्रयास, र Cognos प्रशासनिक कार्यहरु को एक संसार भर मा निराशा बचाउँछ।
स्वचालित थकाऊ Cognos एनालिटिक्स अपग्रेड कार्यहरु
Motioपीआई प्रो अपग्रेड को बाहिर दुखाइ लिन मद्दत गर्दछ। तपाइँको Cognos एनालिटिक्स अपग्रेड मा समय र प्रयास दोहोर्याउने तर आवश्यक कार्यहरु लाई स्वचालित गरी, जस्तै:
प्रमाणीकरण जाँच छिटो तपाइँको Cognos रिपोर्टहरु लाई प्रमाणित गर्न को लागी र तपाइँको अपग्रेड को दायरा बाट अलग गर्न को लागी मान्यता जाँच चलाउनुहोस्।
तपाइँको उन्नत वातावरण मा रिपोर्टहरु असफल हुन को लागी (जस्तै बहिष्कृत एम्बेडेड जाभास्क्रिप्ट को रूप मा) ढाँचा को लागी एक खोज संचालन र त्यसपछि मास मात्र केहि मिनेट मा सुधार प्रतिस्थापन।
थोक मा तपाइँको प्याकेजहरु मा गुण अपडेट गर्नुहोस् काम को घण्टा बचत गर्न को लागी सीक्यूएम बाट रिपोर्टहरु लाई क्यूक्यू मा परिवर्तित गर्न।
Cognos मा तपाइँको कार्यप्रवाह सरल बनाउनुहोस्
त्यहाँ धेरै Cognos कार्यप्रवाह परिदृश्यहरु अनावश्यक, अतिरिक्त कदम काम पूरा गर्न को लागी आवश्यक छ। यहाँ Cognos कार्यहरु को एक सुविधा प्यानल को धेरै मा स्वचालित गरीएको छ Motioपीआई प्रो:
जब सार्दै वा Cognos सामग्री मेटाउने, स्वचालित रूप मा ड्रिल throughs, सर्टकट, रिपोर्ट दृश्य, र अन्य सन्दर्भ वस्तुहरु कि अन्यथा टुटेको हुनेछ अपडेट गर्नुहोस्।
जब थोक सम्पादन एफएम मोडेल बहुभाषी नाम, विवरण, र टूलटिप्स, MotioPI प्रो स्वचालित रूपमा परिवर्तन प्रकाशित गर्न सक्नुहुन्छ।
Cognos प्रशासकहरु को लागी समय बचतकर्ता
यति धेरै गर्न को लागी, समय प्राय एक Cognos व्यवस्थापक को सबैभन्दा मूल्यवान वस्तु हो। धेरै MotioPI प्रो को सुविधाहरु Cognos प्रशासकहरु को लागी समय बचाउन को लागी डिजाइन गरीएको हो। उदाहरण को लागी:
मास Cognos रिपोर्ट को एक सेट को लागी पूर्वनिर्धारित कार्य अपडेट गर्नुहोस्।
पत्ता लगाउनुहोस् र थोक Cognos सामग्री अपडेट गर्न को लागी बदल्नुहोस् (उदाहरण को लागी अपडेट गरीएको छ कि एक मोडेल मा बदलिएको छ कि अपडेट गरीरहेको छ)।
Cognos वस्तुहरु मा ब्याच अपडेट अनुमतिहरु।
Cognos कार्यक्रम को समूहहरु को लागी वितरण विकल्पहरु लाई आवंटित गर्नुहोस्।
कुनै पनि प्रयोगकर्ता को लागी Cognos सामग्री को स्वामित्व तोक्नुहोस्।
स्वचालित रूपमा धेरै Cognos रिपोर्ट (जस्तै "गोपनीय र स्वामित्व") मा पादहरु अपडेट गर्नुहोस्।
धेरै Cognos रिपोर्ट दृश्यहरु को लागी अपडेट मापदण्डहरु वितरण गर्नुहोस्।
माथिका सबै मात्र तरीकाहरु जसमा झलक हो MotioPI प्रो समय बचाउन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ (र बस जीवन सजिलो बनाउन) Cognos प्रशासकहरु को लागी।
Motio PI प्रो पनि तपाइँ पैसा बचाउनुहुन्छ - विशेष गरी जब बाहिरी संसाधनहरु अब स्वचालित गर्न सकिन्छ कि कार्य गर्न को लागी आवश्यक हुनेछ।
Cognos सामग्री / कन्फिगरेसन मा थोक परिवर्तन
थोक मा तपाइँको BI सम्पत्ति मा परिवर्तन गर्न को लागी दर्दनाक, त्रुटि-प्रवण, र समय-उपभोग हुन सक्छ। MotioPI प्रो Cognos मा थोक अपडेट प्रबन्ध गर्न को लागी तरीकाहरु को एक किसिम प्रदान गर्दछ - सेटिंग्स, नीतिहरु, तालिकाहरु, मोडेलहरु, र अधिक सहित - तपाइँ फिर्ता समय र सम्भावित गल्तीहरु को बिरुद्ध मन को शान्ति दिदै।
सम्भावित उपयोगहरु विशाल छन्, तर यहाँ केहि उदाहरणहरु छन्:
थोक परिवर्तन पाठ, छविहरु, लोगो, फन्ट, सुरक्षा पहुँच, कार्यक्रम, मापदण्डहरु, र अधिक
जोड्नुहोस्, हटाउनुहोस् वा रिपोर्ट दृश्यहरु को सयौं को लागी मापदण्डहरु अपडेट गर्नुहोस्
धेरै Cognos रिपोर्ट दृश्यहरु मा मापदण्डहरु वितरण गर्नुहोस्
समूह र भूमिका सदस्यता को लागी थोक व्यवस्थापन
धेरै अवस्थित रिपोर्टहरु लाई मानकीकृत हेडर वा फुटर लागू गर्नुहोस्
सक्षम, असक्षम, वा धेरै प्रयोगकर्ताहरु को लागी Cognos कार्यक्रम मेटाउनुहोस्
MotioPI फ्रीवेयर समावेश छ:
Zरिपोर्ट (हरू) प्रमाणित गर्नुहोस्
Zसमीक्षा प्रयोगकर्ता पहुँच र अनुमतिहरु
Zविस्तृत भण्डारण उपयोग
Zमेटाइएको प्रयोगकर्ता (हरू) बाट सामग्री पुन: प्राप्ति
Zएउटा प्याकेज संग सम्बन्धित रिपोर्ट पाउनुहोस्
Zहराएको वा भ्रष्ट एफएम मोडेल पुनःप्राप्त गर्नुहोस्
ZHTML मा निर्यात गर्नुहोस्
को सबै सुविधाहरु MotioPI +:
Zपत्ता लगाउनुहोस् र Cognos वस्तु (हरू) भित्र बदल्नुहोस्
Zरिपोर्ट (हरू) को लागी मापदण्डहरु सेट गर्नुहोस्
ZCognos वस्तु (हरू) को लागी गुणहरु सेट गर्नुहोस्
Zमर्मत टूटेको लिंक र निर्भरता
Zमालिक परिवर्तन गर्नुहोस्
Zएक्सेलमा निर्यात गर्नुहोस्